विज्ञापन ... आज हामीलाई सबैतिर सँगसँगै: पोस्टर र ब्यानरहरू, ब्यानरहरू र बिलबोर्डहरू, पर्चा, ब्यानर, pennants, टीवी विज्ञापनहरु, धेरै अन्य, किन्न जानुहोस्, प्रयास गर्नुहोस् ... अनि जब त्यहाँ पहिलो विज्ञापन थियो हामीलाई कल को विधिहरू?
पुरातात्त्विक भेट्टाउनेछन् पनि घटना लागि प्राचीन संसारमा धेरै गम्भीर उपचार भनेर संकेत गर्छ। केही विद्वान विज्ञापन को इतिहास प्राचीन मिश्र यसको जरा छ भन्ने विश्वास गर्छन्। कम से कम, दास को बिक्री को घोषणा संग पहिलो papyrus यो देशमा पाइएको छ। केही हदसम्म पछि, पुरातन ग्रीस र प्राचीन रोम को क्षेत्रमा, इतिहासकारहरूले केही सामान को बिक्री बारेमा जानकारी समावेश धेरै बोर्डहरू हड्डी प्लेट, पीतल प्लेट भेट्टाएको छु। तिनीहरूले6वा 8 सहस्राब्दी ई.पू. फिर्ता मिति।
विज्ञापन को इतिहास, अनुसन्धानकर्ताहरूले फेला, व्यापार को आगमन संग सुरु हुन्छ। मिडिया (papyrus, तामा, हड्डी) जानकारी त्यसपछि ठूलो स्वरले सबैभन्दा भीड ठाउँमा पढ्न थियो को एक किसिम मा लेखिएको। पनि त, विज्ञापन उद्देश्य विज्ञापन संभावित खरीदारों को मन मा ब्याज adventurous अन्तरदृष्टि आकर्षित थियो। विक्रेता, अडियो, दृश्य, लिखित विधिहरू प्रयोग गरेर खरीदारों विज्ञापनदाताहरु कार्यहरू लागि आकर्षक र लाभदायक बनाउन बाध्य।
विज्ञापन को इतिहास यो घटना को विकास मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गो 1472 मा थाले सुझाव। केही हदसम्म पहिले, यो आविष्कार थियो , मुद्रण प्रेस अर्थात् यो वर्ष फिर्ता पहिलो मुद्रित गर्न तिथिहरु विज्ञापन। उनले चर्चका ढोका फेला परेन, र यो प्रार्थनाको बिक्री मा रिपोर्ट छ।
मुद्रण मिडिया मा विज्ञापन पहिलो 1630 मा देखियो। Enterprising फ्रान्सीसी Theophrastus Renaudot "फ्रान्सेली अखबार" मा प्रदर्शन विज्ञापन थियो। एक पहिलो - एक सभ्य इनाम, एक व्यक्ति चोरी घोडाहरू को धेरै स्थान निर्दिष्ट गर्न पाउनेछ जो बारेमा।
एकै समयमा वरिपरि पहिलो विज्ञापन ब्यानर आए। यो एक तस्वीर आकर्षित गर्न, परीक्षण लेख्नका लागि छडी कागज को टुक्रा को विभाजन अन्त सम्मिलित थियो। उहाँले सस्ती फ्रान्सेली courgettes को एक को विन्डो मा राख्नु भएको थियो: आफ्नो सस्ती भान्सा विज्ञापन।
विज्ञापन को औद्योगिक इतिहास को विकास संग गति पाउन थाले। 1839 यो मामला मा देखि फोटो प्रयोग गर्दछ। र छैन जो आजको देखि त धेरै फरक प्रारम्भिक 19 औं सताब्दी मा पहिलो विज्ञापन एजेन्सी थियो। आफ्नो कर्मचारी अखबार मा पट्टी किनेको, र त्यसपछि एक उच्च मूल्य मा विज्ञापनदाताहरु तिनीहरूलाई resold।
रूस मा, विज्ञापन को इतिहास जस्तै चाँडै विकसित भएको छ। को 10-11 उमेर Shill लोकप्रिय, लोकप्रिय प्रिंट परिवर्तन चाँडै मुद्दहरुलाई विज्ञापन औंठी दिनुभयो। एक सानो पछि, रंगीन पत्रक खिडकियों देखा पर्न थाले सार्वजनिक भवनहरु को, तिनीहरूले सजाया थिए ट्राम, trams। धेरै प्रतिष्ठानबाट आफ्नो सम्पर्क संग पात्रो मुद्रित। यो विज्ञापन मा विशेषज्ञता धेरै कार्यालय खोलिएको थियो।
बिस्तारै विकास र सुधार, घोषणाहरू, पात्रो र यति मा। हाम्रो दिन सम्म बाँचे।
90 वर्ष मा सामाजिक विज्ञापन को इतिहास रूस मा सुरु हुन्छ। आज, यो नागरिक र राज्य बीचको सकारात्मक सम्बन्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सामाजिक गैर लाभ विज्ञापन, प्रकृति जोगाउन, आदि ठीक छोराछोरीलाई हुर्काउन, हिंसा लड्न आमाबाबुको प्रेम भन्छ
इन्टरनेटमा विज्ञापन को आगमन संग इतिहास नयाँ मोड बनाउँछ। नेटवर्क अहिलेसम्म सबैभन्दा मानिसहरूलाई परिचित छ, तर "techies" पहिले नै प्रत्येक अन्य सान्दर्भिक जानकारी इमेल ठेगाना फर्वार्ड छन्। मेलिङ पहिले नै अस्तित्वमा थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो इन्टरनेट विज्ञापन को इतिहास नब्बे को दशक मा सुरु कि विश्वास छ। यो, विशेषज्ञहरु अनुसार ", सुनको समय स्पाम", को थियो र एकै समयमा उत्पत्ति ब्यानर विज्ञापन।
आज, वेब विज्ञापन सबै कल्पना र wildest आशा surpassed छ। तर यो इतिहास को अन्त छैन।
यसको अस्तित्व को विभिन्न अवधि मा सीआईएस समावेश थिए देश
एनी नेभिल: फोटो, जीवनी। एनी नेभिल र रिचर्ड Gloster
हामी चिकन शोरबा एक स्वादिष्ट सूप बनाउन
आधुनिक आर्थिक भूगोल: अध्ययन को वस्तु
कसरी बाट, को खोकी को प्राप्त छुटकारा बच्चा मदत गर्न?
तपाईं कत्तिको एकैचोटि valerian ट्याब्लेटको पिउन सक्नुहुन्छ? Valerian ट्याब्लेटको: प्रयोग, औषधिको खुराक, समीक्षा लागि निर्देशन
तपाईं lilacs रोपेर गर्न चाहनुहुन्छ? रोपण र मर्मतका धेरै सरल छन्
गोंद बन्दूक: चयन विशेषताहरु
कुनै भोक: के? उपयोगी आशय